အမေရိကန် ဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေ အင်တာဗျူးဝင်ရမယ့် နေ့မှသာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြသနိုင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း အမေရိကန် ဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေ အင်တာဗျူးဝင်ရမယ့် နေ့မှသာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြသနိုင်
A pedestrian holds her and her child's passport while waiting to cross into the United States from Mexico at the San Ysidro border crossing in San Ysidro, California January 31, 2008. U.S. border control began enforcement ofarule on Thursday that requires all U.S. and Canadian citizens above the age of 19 to present government-issued identification as proof of identity at all international land and sea border crossings. REUTERS/Fred Greaves (UNITED STATES) - RTR1WIYD
အမေရိကန် ဗီဇာလျှောက်ထားသူတွေ အင်တာဗျူးဝင်ရမယ့် နေ့မှသာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ပြသနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ အမေရိကန်ကို သွားရောက်ဖို့အတွက် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရာမှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို လူတွေ့အင်တာဗျူးမတိုင်မီ အမေရိကန်သံရုံးကို သံရုံးစာတိုက်ပုံးကနေတစ်ဆင့် ကြိုတင်ပို့ဆောင်ဖို့ မလိုအပ်တော့ဘဲနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ အမေရိကန်သံရုံး ကောင်စစ်ဝန်ဌာန စာတိုက်ပုံးကို ပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ကနေ စတင်ပြီး စာရွက်စာတမ်းတွေကို ဗီဇာလျှောက်လွှာရှင်တွေအနေနဲ့ အင်တာဗျူးဝင်ရမယ့် နေ့မှသာ တပါတည်း ပြသနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အခုလို အမေရိကန်သံရုံုး ကောင်စစ်ဝန်ဌာနရဲ့ စာတိုက်ပုံးကို ပိတ်သိမ်းလိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပေးအပ်ထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၀န်ဆောင်မှု၊ အခြေမစိုက်ဗီဇာ နဲ့ အခြေစိုက်ဗီဇာ လျှောက်ထားခြင်းတွေအတွက်ကတော့ ကြိုတင် ရက်ချိန်းရယူလို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမရေိကနျ ဗီဇာလြှောကျထားသူတှေ အငျတာဗြူးဝငျရမယျ့ နမှေ့သာ စာရှကျစာတမျးတှကေို ပွသနိုငျ
မွနျမာနိုငျငံသားတှေ အနနေဲ့ အမရေိကနျကို သှားရောကျဖို့အတှကျ ပွညျဝငျခှငျ့ဗီဇာလြှောကျထားရာမှာ လိုအပျတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှကေို လူတှအေ့ငျတာဗြူးမတိုငျမီ အမရေိကနျသံရုံးကို သံရုံးစာတိုကျပုံးကနတေဈဆငျ့ ကွိုတငျပို့ဆောငျဖို့ မလိုအပျတော့ဘဲနဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ ၅ ရကျနကေ့နစေတငျပွီးတော့ အမရေိကနျသံရုံး ကောငျစဈဝနျဌာန စာတိုကျပုံးကို ပိတျသိမျးတော့မှာဖွဈကွောငျး အမရေိကနျသံရုံးက ထုတျပွနျထားပါတယျ။
နိုဝငျဘာလ ၅ ရကျနကေ့နေ စတငျပွီး စာရှကျစာတမျးတှကေို ဗီဇာလြှောကျလှာရှငျတှအေနနေဲ့ အငျတာဗြူးဝငျရမယျ့ နမှေ့သာ တပါတညျး ပွသနိုငျမှာဖွဈကွောငျး၊ အခုလို အမရေိကနျသံရုံုး ကောငျစဈဝနျဌာနရဲ့ စာတိုကျပုံးကို ပိတျသိမျးလိုကျတာဟာ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို ပေးအပျထားတဲ့ ဝနျဆောငျမှု ပိုမိုကောငျးရေးအတှကျ ဖွဈကွောငျး အဲဒီထုတျပွနျခကျြထဲမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အမရေိကနျနိုငျငံသား ဝနျဆောငျမှု၊ အခွမေစိုကျဗီဇာ နဲ့ အခွစေိုကျဗီဇာ လြှောကျထားခွငျးတှအေတှကျကတော့ ကွိုတငျ ရကျခြိနျးရယူလို့ လိုအပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleမြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အောင်လအန်ဆန် ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ဆက်လက် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့
Next articleအိမ်ထောင်ရှင် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် မြစ်ကြီးနားသူ ဆုရရှိ